मन्त्री मातृका यादव किन पुगे दिल्ली ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
मन्त्री मातृका यादव किन पुगे दिल्ली !
२०७४ चैत ६ मंगलवार
काठमाडौं, ६ चैत – उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव दिल्ली पुगेका छन् । बाम गठबन्धन सरकारको तर्फबाट भारत पुगेर मन्त्रीसँग भेट गर्ने उनी पहिलो मन्त्री हुन् । सरकारको तर्फबाट कुनैपनि औपचारिक सार्वजनिक नगरी उनी दिल्ली हान्निएका हुन् ।
भारतीय भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले ट्विटरमा फोटो राखेपछि उनी दिल्ली पुगेको नेपाली मिडियाले थाहा पाएका हुन् । उनले भारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजसँग बसेको फोटो सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनी किन पुगे भन्ने बारेमा नेपाल सरकारको तर्फबाट औपचारिक रुपमा कुनै जानकारी छैन । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले लेखेका छन् ‘छिमेकीसँगको पहिलो भेट ।’
नेपालका उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री यादवले विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई भेटेका छन् । दुई मन्त्रीले विकासको साझेदारी तथा बाणिज्य व्यापारका बारेमा छलफल भएको प्रवक्ता रवीश कुमारले उल्लेख गरेका छन् । नेपाल भारत बीचको आगामी विकासमा साझेदारीका विषयमा दुई मन्त्री बीच छलफल भएको जनाइएको छ ।